people Nepal » यात्राकाे क्रममा वान्ता गर्नुहुन्छ ? रोक्ने घरेलु उपाय ! यात्राकाे क्रममा वान्ता गर्नुहुन्छ ? रोक्ने घरेलु उपाय ! – people Nepal
यात्राकाे क्रममा वान्ता गर्नुहुन्छ ? रोक्ने घरेलु उपाय !
यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ ? अदुवा र ल्वाङ लग्न पक्कै नबिर्सिनुस् । मसलाका रूपमा प्रयोग गरिने अदुवा र ल्वाङ प्रत्येक घरमा उपलब्ध हुन्छन् । यस्ता खाद्यवस्तुले खानाको स्वाद मात्र बढाउँदैन, औषधीको रूपमा समेत काम गर्छ ।
त्यसैले त, पहिले पहिलेका बुढापाका तथा ऋषिमुनिहरूले अदुवा, ल्वाङ्ग, कागती लगायतलाई औषधीका रूपमा वर्णन मात्र गरेका छैनन्, औषधीकै रूपमा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
अदुवा यस्तो खाद्य वस्तु हो जुन प्रत्येक घरको भान्छामा देख्न सकिन्छ । अदुवाले खानाको स्वाद मात्र बढाउँदैन । वाकावाकी वा वान्ता रोक्न समेत मद्दत गर्छ ।
यात्राको दौरान वान्ता आउला जस्तो भएमा वा वाकवाकी लागेमा अदुवाको गोली वनाएर वा अदुवा हालेको चियाको सेवन गरेर समस्यालाई तुरुन्तै रोक्न सकिन्छ ।
मसलाको रूपमा प्रयोग हुने ल्वाङले खानाको स्वाद मात्र बढाउँदैन । विभिन्न रोगहरूमा औषधीको रूपमा समेत काम गर्छ । विशेषगरी, लामो दुरीको यात्राका क्रममा एक टुक्रा ल्वाङलाई मुखमा राख्दा यसले मुखलाई मिठो त बनाउँछ नै औषधीको रूपमा वान्ता रोक्न समेत सघाउ पुर्‍याउँछ ।
गर्मी मौसममा पुदिनाकेा सेवन स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । यसले शरीरलाई गर्मी हुनबाट जोगाएर शरीरलाई चिसो राख्न मद्दत गर्छ । साथै, यसले यात्राको दौरान वाकवाकी लाग्न तथा वान्ता हुनबाट समेत जोगाउँछ ।
एउटा रुमालमा केही थोपा पुदिनाको तेल राख्ने र, त्यो रुमाललाई बेला बेलामा सुँघ्ने । यति गरे मात्र पनि लामो यात्राका क्रममा वान्ता हुने समस्याबाट जोगिन सकिन्छ ।
प्याज मन नपर्ने विरलै होलान् । सलादको रूपमा होस्, वा तरकारी, प्याजका परिकार हरेक घरमा बन्ने गर्छ । तर यसलाई औषधीको रूपमा भने कतिले प्रयोग गर्लान् ? प्याज औषधीको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । तर यो औषधीको रूपमा मात्र हैन, वान्ता रोक्नका लागि पनि रामवाणको रूपमा प्रयोग हुने गर्छ । एक चम्चा प्याजको रसमा एक चम्चा अदुवाको रस मिसाएर सेवन गर्दा वान्ता रोक्ने मात्र हैन, यात्राको दौरान वाकवाकी लाग्ने समस्या समेत हुन दिँदैन ।
कागतीलाई औषधीको रूपमा पनि लिइन्छ । यसमा पाइने साइटि्रक एसिडले उल्टी तथा वाकवाकी लाग्नबाट रोक्ने गर्छ । त्यसैले त बूढापाकाहरू वाकवाकी लागेमा वा धेरै वान्ता भएमा कागती चुस्न सल्लाह दिने गर्छन् ।
वान्ता रोक्ने विभिन्न घरेलु औषधीकेा सूचीमा दालचिनी पानी पनि पर्छ । दालचिनीलाई तातोपानीमा पकाएर त्यसमा मह मिसाएर पिएको खण्डमा पनि यात्रामा वान्ता हुँदैन । यो सुरक्षित तथा उपयोगी भएकै कारण मोसन सिकनेस भएमा समेत गर्भवती महिलाहरूलाई दालचिनी पानी खान सुझाव दिइने गरिन्छ ।
सुन्तलाको रसले वान्ता तथा वाकवाकी लाग्ने समस्यालाई तुरुन्तै कम गर्छ । त्यसैले बूढापाकाहरू यात्राका दौरान सुन्तला खान सुझाव दिने गर्छन् । सुन्तलाको जुस वा रसमा केही थोपा अदुवा तथा पुदिनाको रस मिसाएर पिएको खण्डमा यसले वान्ता हुने व्यक्तिमा चमत्कार नै गराइदिन्छ ।